Server Flood: Tratrako ialahy | Hery - Tsiky dia ampy
Efa elaela tokoa izay no surchargé foana ny serveur-n'ny serasera amin'ny fotoana voafaritra. Taloha be dia efa noteneniko io ranamana io dia niteny hoe manao essai-n'ny tanjaky ny serveur-ny hono izy fa tena azafady. Dia hoy aho hoe maninona no tsy ny yahoo na ny hotmail no anandramana ny tanjaky ny serveur-ny? Tsy dia mitombona ilay excuses ny tanjona dia ny hanjera ny serveur-n'ny serasera.org.
Niverimberina imbetsaka ihany ilay izy... ka hoy aho hoe ny script-ko izany no tokony hatsaraina angamba. Izay angamba no message tiany hampitaina. Ary raha vao misy bug kely dia maika ery i leiry handefa ao amin'ny forum (avec toutes ses intelligences) hoe tsy mety izao, tsy mety izao. Nahatsara ihany aloha satria noezahiko nahitsy hatrany izay nolazainy. Na izany aza anefa tsy mbola hitako mihitsy nanome sosokevitra tamin'izay olana nolazainy ilay rangahy io.
Nony avy eo dia nisy fotoana indray misy olona mahazo bizoroka maromaro tampoka ao anatin'ny roa andro voalohany. Dia fantatro fa miketrika indray ilay ranamana. Dia io tokoa
Ary farany dia nisy namana izay efa elaela tsy namangy namana kanefa mahazo isa be dia be. Dia nametraka log kely aho hijerena hoe inona indray no ataon'ilay ranamana. Dia hita tokoa fa isaky ny 5 segondra dia mitety ny mombamomba ny namana vitsivitsy ilay ranamana. Koa satria mampitombo ny isan'ny namana ny famangiana ny momba azy... dia miakatra izaitsizy ny isan'ireo namana vitsivitsy ireo. Dia inona izao no tanjona amin'izany? Mazava ho azy fa tsy tanana no ampiasaina fa angamba script na commande manokana satria misy namana tsy eo amin'ny lisitry ny mahazo isa be no mbola antsoina ny mombamomba azy.
Tsy hitako mihitsy hoe inona no tena tombotsoan'ilay rangahy io amin'ny zavatra ataony toa izao sa izany tokoa no atao hoe tsy ampy fialam-boly? Raha tena kraky dia tokony ireny milina goavana ireny no kotabaisina... ary sao dia izany aza no maha-fotsy volo rapida be an-dranamana io lol
Ok tsiky dia ampy foana.
NB: Azo jerena tsara ny log nataoko hahitana ireo zavatra lazaiko ireo. Ahitana ny pseudo, ny daty.
- Tsy nisodisody intsony i leiry hatramin'ny 9 jiona nony hitany ity hafatra ity, ary nony hitany koa ilay blokazy hoe "Aza maika loatra". Hitako connecté ao amin'ny yahoo ao anefa.
Tsara ilay voambolana nampiasain'i Hery niantsoana an'ilay rangahy mpanakotaba hoe "ranamana". Ironical be ilay izy fa sahaza azy tsara. Mialona anao izy sady te hi challenge ny fahaizanao. Izay no fahitako azy tsotsotra. Torahy tsiky foana marina izy e. Aza omena tsiny fa tsy fantany izay ataony.
Nampidirin'i Tadio @ 04:13, 2006-06-08 [Valio]
Te-hijery angamba izy hoe mba mahay ve ny mpikarakara ity sehatra ity e!
Nampidirin'i jentilisa @ 07:43, 2006-06-08 [Valio]
Bizoroka omena masinina izany ve tsy mangatsiaka be kle? :)
Ary hitako za nahazo an'ilay hoe: "Aza maika loatra, mahandrasa kely 1 segondra", fiarovana an'ilay flood angamba iny? :D
Nampidirin'i lapino @ 08:52, 2006-06-08 [Valio]
Nasiana an'iny fa sur aho fa mbola azo tapahina tsara io.
Nampidirin'i Hery @ 08:57, 2006-06-08 [Valio]
Tena tsy hitako mihitsy aloha izay tombontsoa hanaovana an'izany e!
Nampidirin'i fraz @ 19:44, 2006-06-08 [Valio]
Mba be koa ny tsy manakatao :)
fa mba lazao ihany hoe iza ilay ranamana amin'izay mba ho hitan'ny be sy ny maro
Nampidirin'i nikopol @ 05:22, 2006-06-12 [Valio]